” မယ်တင် နဲ့ ကိုဗစ် ” ( ဟာသ ) – Na Pann San
စာရှည်ပေမဲ့ ရီရလွန်းလို့ ….
” မယ်တင် နဲ့ ကိုဗစ် ”
မယ်တင်တစ်ယောက်ချောင်းဆိုးသည်။ချမ်းတုန်သည်။ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲနေသည်။အသက်ရှုလဲမဝချေ။ကိုယ်အပူချိန်သည် တခါတခါ တိုင်းလိုက်လျှင် 99 / 100 လောက်ဖြစ်နေတတ်သည်။
ထိုအချက်များအရ မယ်တင်သည် မိမိကိုယ်ထဲတွင် ကိုဗစ် နိုင်တီးန် ရောက်နေပြီဟုဆိုကာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံအကြောင်းကြားရန် လာခဲ့တော့သည်။မယ်တင်က “ကျမ ကွကို ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိသိ ကွာရန်တင်းန်ရမယ် ယောကျာ်း”ဟု ပြောကာ ပုတက် ပုတက် ထွက်သွားလေလျှင် မယ်တင့်ယောကျာ်း ကိုရင်သည်နောက်ကအပြေးအလွှားလိုက်လာခဲ့ရလေသည်။ကိုရင်ရောက်သည့်အချိန်တွင် မယ်တင့်ကို ဆရာဝန်နှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က မေးမြန်းနေကြလေပြီ။
မယ်တင်က “ကျမ တိုင်းတာ 100 ရှိတယ် ဒေါက်တာ” ဟု ဆိုလေလျှင် ကိုရင်က ကပျာကယာဝင်ပြောရတော့သည်။
“ဒေါက်တာရယ် သူက နေ့ခင်းဆယ့်နှစ်နာရီလောက်ကို ပိုးသေအောင်ဆိုပြီး အပြင်ထွက်နေပူခံတယ်။ သူနဲ့ သာမိုမီတာတစ်ပါတည်း ယူသွားတာ ဒေါက်တာ။ နာရီဝက်/တစ်နာရီလောက် နေပူခံပြီး တိုင်းကြည့်တာကို တစ်ရာကျော်တယ်ပြောလိုပြောနဲ့ ဒေါက်တာရယ်”
” အို…ကျမ ချောင်းလဲဆိုးတယ်ရှင့်”
“ဆိုးမှာပေါ့ ဒေါက်တာရယ်။ အရည်များများသောက်ရမယ်ဆိုလို့ ရေတွေသောက်လိုက် ရေက အရသာမရှိဘူးဆိုပြီး သူ ဝယ်ထားတဲ့ ၆လစာ အချိုရည်တွေကို ၆ရက်လောက်နဲ့ ကုန်အောင်သောက်လိုက်လုပ်တော့ မဆိုးဘဲနေပါ့မလား ‌ဒေါက်တာ”
ဆရာဝန်က မျက်လုံးပြူးကြည့်နေတုန်းမယ်တင် ပေကလပ် ပေကလပ်ဖြင့်
“ကိုရင်ရယ် ကျမ ကိုယ်တွေလက်တွေကိုက်တာကျတော့ကော”
“အော် မကိုက်ဘဲနေမလား။ ဟိုနေ့က ငါမရှိတုန်း နင်လေ ဆန်ဆိုင်ကို ဆန်ငါးအိတ်လာပို့ပါဆိုပြီး ဆန်ဆိုင်ကလာပို့တော့ အဲဒီလူကို အိမ်ထဲ အဝင်မခံဘဲ အိမ်ရှေ့ပုံခဲ့ပါဆိုပြီး နင့်ဘာသာ နင် ဆန်အိတ်တွေ မီးဖိုချောင်ထဲ မ, ရွှေ့တာလေ”
ကိုရင်က ဒေါကြီးမောကြီး ထ အော်သဖြင့် မယ်တင် ငြိမ်နေစဉ်
ဆရာဝန်က “ဒါဖြင့် အသက်ရှုကြပ်တယ်ဆိုတာကကောရှင့်” ဟု မေးလေရာကိုရင်က စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့်
“‌ဒေါက်တာရယ် mask ကို ငါးထပ်စွပ်ပြီး လက်ကို hand gel နဲ့ သုံးမိနစ်တစ်ခါပွတ်လိုက် သူ့ဘာသာ ပြန်ရှူကြည့်လိုက်လုပ်နေတာ။ သူ မပြောနဲ့ ကျနော်တောင် မွန်းတယ်” ဟု ဖြေလေသည်။
“ဟို ကျမ မှာ ခရီးသွားရာဇဝင်ရှိ..ရှိ”
“ဘာ…နင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်က ဘန်ကောက်ကို တစ်ခါလေးသွားဖူးတာကို ခရီးသွားရာဇဝင်ရှိတယ် ဟုတ်လား”ဟု မေးရာ မယ်တင်က “ဆယ့်လေးနှစ်အတွင်း သွားဖူးရင် ကိုဗစ်ဆို”ဟု လေပျော့လေးဖြင့်ပြန်မေးလေသည်။ “သေပါတော့ဟယ်။ ဆယ့်လေးရက်အတွင်းကို ချဲ့လိုက်တာ ဆယ့်လေးနှစ်တောင်ဖြစ်ရတယ်” ဟု အုပ်ချုပ်ရေးမှုးက ညည်းလေသည်။
မယ်တင်သည် ကိုရင့်ကို မဝံ့မရဲကြည့်ရင်း”ချမ်း ..ချမ်းတုန်တာကျတော့ကော ကိုရင်ရဲ့” ဟု အထွန့်တက်လေသည်။ကိုရင်သည် မယ်တင့်ကို မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ကြည့်ရင်းက “နင်နဲ့ငါရဲ့ ဆယ့်နှစ်ပေ ပတ်လည်အခန်းလေးထဲ နှစ်ကောင်အား အဲကွန်းကို တပ်ခိုင်းတာလဲ နင်ပဲ။ ပြီးတော့ stay at home ဆိုပြီးကတည်းက နင်းကန် ဒေါင်းထားတဲ့ နင့်လင် ကိုရီးယားကားတွေ ကြည့်ရင်း အဲကွန်းရီမုဒ်ကို ဘယ်နှစ်ချက်မှန်းမသိ နှိပ်ထားတာ ငါကြည့်တော့ ဆယ့်ခြောက်ဖြစ်နေတယ်လေ အရူးမရဲ့။
ဒေါက်တာရယ် ကျနော့် မိန်းမကို ကွာရန်တင်းမယ်ဆိုလည်း ဝေဘာဂီတို့ ရှင်ဆေကိန္ဒကျောင်းတို့မှာ မထားပါနဲ့။ တစ်ခါတည်း ရွာသာကြီးမှာသာ ထားပေးပါခင်‌ဗျာ” ဟု ဆိုလိုက်လေတော့သတည်း။ ။
ဒီအချိန်လေးမှာ ရီမောခြင်းနဲ့ စိတ်ပင်းပန်းမှုတွေ လျော့ကြပါစေ…
စာရှညျပမေဲ့ ရီရလှနျးလို့ ….
” မယျတငျ နဲ့ ကိုဗဈ ”
မယျတငျတဈယောကျခြောငျးဆိုးသညျ။ခမျြးတုနျသညျ။ကိုယျလကျကိုကျခဲနသေညျ။အသကျရှုလဲမဝခြေ။ကိုယျအပူခြိနျသညျ တခါတခါ တိုငျးလိုကျလြှငျ 99 / 100 လောကျဖွဈနတေတျသညျ။
ထိုအခကျြမြားအရ မယျတငျသညျ မိမိကိုယျထဲတှငျ ကိုဗဈ နိုငျတီးနျ ရောကျနပွေီဟုဆိုကာ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးထံအကွောငျးကွားရနျ လာခဲ့တော့သညျ။မယျတငျက “ကမြ ကှကို ပွညျသူတဈယောကျအနနေဲ့ တာဝနျသိသိ ကှာရနျတငျးနျရမယျ ယောကျြား”ဟု ပွောကာ ပုတကျ ပုတကျ ထှကျသှားလလြှေငျ မယျတငျ့ယောကျြား ကိုရငျသညျနောကျကအပွေးအလှားလိုကျလာခဲ့ရလသေညျ။ကိုရငျရောကျသညျ့အခြိနျတှငျ မယျတငျ့ကို ဆရာဝနျနှငျ့ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးတို့က မေးမွနျးနကွေလပွေီ။
မယျတငျက “ကမြ တိုငျးတာ 100 ရှိတယျ ဒေါကျတာ” ဟု ဆိုလလြှေငျ ကိုရငျက ကပြာကယာဝငျပွောရတော့သညျ။
“ဒေါကျတာရယျ သူက နခေ့ငျးဆယျ့နှဈနာရီလောကျကို ပိုးသအေောငျဆိုပွီး အပွငျထှကျနပေူခံတယျ။ သူနဲ့ သာမိုမီတာတဈပါတညျး ယူသှားတာ ဒေါကျတာ။ နာရီဝကျ/တဈနာရီလောကျ နပေူခံပွီး တိုငျးကွညျ့တာကို တဈရာကြျောတယျပွောလိုပွောနဲ့ ဒေါကျတာရယျ”
” အို…ကမြ ခြောငျးလဲဆိုးတယျရှငျ့”
“ဆိုးမှာပေါ့ ဒေါကျတာရယျ။ အရညျမြားမြားသောကျရမယျဆိုလို့ ရတှေသေောကျလိုကျ ရကေ အရသာမရှိဘူးဆိုပွီး သူ ဝယျထားတဲ့ ၆လစာ အခြိုရညျတှကေို ၆ရကျလောကျနဲ့ ကုနျအောငျသောကျလိုကျလုပျတော့ မဆိုးဘဲနပေါ့မလား ‌ဒေါကျတာ”
ဆရာဝနျက မကျြလုံးပွူးကွညျ့နတေုနျးမယျတငျ ပကေလပျ ပကေလပျဖွငျ့
“ကိုရငျရယျ ကမြ ကိုယျတှလေကျတှကေိုကျတာကတြော့ကော”
“အျော မကိုကျဘဲနမေလား။ ဟိုနကေ့ ငါမရှိတုနျး နငျလေ ဆနျဆိုငျကို ဆနျငါးအိတျလာပို့ပါဆိုပွီး ဆနျဆိုငျကလာပို့တော့ အဲဒီလူကို အိမျထဲ အဝငျမခံဘဲ အိမျရှပေုံ့ခဲ့ပါဆိုပွီး နငျ့ဘာသာ နငျ ဆနျအိတျတှေ မီးဖိုခြောငျထဲ မ, ရှတေ့ာလေ”
ကိုရငျက ဒေါကွီးမောကွီး ထ အျောသဖွငျ့ မယျတငျ ငွိမျနစေဉျ
ဆရာဝနျက “ဒါဖွငျ့ အသကျရှုကွပျတယျဆိုတာကကောရှငျ့” ဟု မေးလရောကိုရငျက စိတျပကျြလကျပကျြဖွငျ့
“‌ဒေါကျတာရယျ mask ကို ငါးထပျစှပျပွီး လကျကို hand gel နဲ့ သုံးမိနဈတဈခါပှတျလိုကျ သူ့ဘာသာ ပွနျရှူကွညျ့လိုကျလုပျနတော။ သူ မပွောနဲ့ ကနြျောတောငျ မှနျးတယျ” ဟု ဖွလေသေညျ။
“ဟို ကမြ မှာ ခရီးသှားရာဇဝငျရှိ..ရှိ”
“ဘာ…နငျ လှနျခဲ့တဲ့ ၅နှဈက ဘနျကောကျကို တဈခါလေးသှားဖူးတာကို ခရီးသှားရာဇဝငျရှိတယျ ဟုတျလား”ဟု မေးရာ မယျတငျက “ဆယျ့လေးနှဈအတှငျး သှားဖူးရငျ ကိုဗဈဆို”ဟု လပြေော့လေးဖွငျ့ပွနျမေးလသေညျ။ “သပေါတော့ဟယျ။ ဆယျ့လေးရကျအတှငျးကို ခြဲ့လိုကျတာ ဆယျ့လေးနှဈတောငျဖွဈရတယျ” ဟု အုပျခြုပျရေးမှုးက ညညျးလသေညျ။
မယျတငျသညျ ကိုရငျ့ကို မဝံ့မရဲကွညျ့ရငျး”ခမျြး ..ခမျြးတုနျတာကတြော့ကော ကိုရငျရဲ့” ဟု အထှနျ့တကျလသေညျ။ကိုရငျသညျ မယျတငျ့ကို မကျြထောငျ့နီကွီးနဲ့ ကွညျ့ရငျးက “နငျနဲ့ငါရဲ့ ဆယျ့နှဈပေ ပတျလညျအခနျးလေးထဲ နှဈကောငျအား အဲကှနျးကို တပျခိုငျးတာလဲ နငျပဲ။ ပွီးတော့ stay at home ဆိုပွီးကတညျးက နငျးကနျ ဒေါငျးထားတဲ့ နငျ့လငျ ကိုရီးယားကားတှေ ကွညျ့ရငျး အဲကှနျးရီမုဒျကို ဘယျနှဈခကျြမှနျးမသိ နှိပျထားတာ ငါကွညျ့တော့ ဆယျ့ခွောကျဖွဈနတေယျလေ အရူးမရဲ့။
ဒေါကျတာရယျ ကနြေျာ့ မိနျးမကို ကှာရနျတငျးမယျဆိုလညျး ဝဘောဂီတို့ ရှငျဆကေိန်ဒကြောငျးတို့မှာ မထားပါနဲ့။ တဈခါတညျး ရှာသာကွီးမှာသာ ထားပေးပါခငျ‌ဗြာ” ဟု ဆိုလိုကျလတေော့သတညျး။ ။
ဒီအခြိနျလေးမှာ ရီမောခွငျးနဲ့ စိတျပငျးပနျးမှုတှေ လြော့ကွပါစေ…